Izindaba - Kunamakhono okuthenga izinqola zabantwana. Ochwepheshe bazokufundisa ukuthi ukhethe kanjani futhi uthenge amakalishi ezingane ngendlela efanele
Kunamakhono okuthenga izinqola zabantwana. Ochwepheshe bazokufundisa ukuthi ukhethe kanjani futhi uthenge kahle amakalishi ezingane
Gxila kwikhwalithi yomkhiqizo nokuphepha, nikeza ukukhishwa kwekhwalithi okugunyazwe kakhulu, izikhungo zokuhlola ezinolwazi kakhulu, izinga eliphakeme lokuchazwa kongoti, ukudala impilo esezingeni eliphezulu. Ngakho-ke abathengi kufanele bazithenge kanjani izinqola ezifanelekayo nezisebenziseka kalula?
Intatheli yenza izingxoxo ezingahleliwe kwezinye izitolo ezinkulu, futhi izakhamizi eziningi zathi into ebaluleke kakhulu okufanele uyinake lapho uthenga izinqola zabantwana yikhwalithi nokunethezeka kwemikhiqizo.
Umthengi uNie utshele abezindaba ukuthi into yokuqala isondo. Ucabanga ukuthi kufanele kube yi-anti-skid eyodwa. Ngemuva kwalokho kunethezeka ukuhlala nokulala phansi, kwenzelwe izingane. Ezinye izimoto zinomhlane nesinqe esiningi kakhulu, ikakhulukazi lapho zilele phansi. Kungcono ukuba namakhushini ngaphansi kwawo.
Kodwa umthengi uNks Li ucabanga, ukuthengwa kwengane yokuthenga ngokuvamile kuqala kukhululeke, ingane, isici esihle. Kunethezekile ukuhlala. Vele uphushe ingane.
“Kufanele sinake inkinga yekhwalithi. Intengo inengqondo, ikhwalithi ingcono, futhi ukusebenza kwezindleko kuphezulu. Into ethize ukunaka ukuphepha, kufanele kube namandla, ingane ehleli kuyo akulula ukuwa. ”Umthengi uNkk Wang.
Ochwepheshe batshele izintatheli ukuthi abazali kufanele baqale ngokuya ngeminyaka eyehlukene yezingane ukuze bathenge izinqola ezihambahambayo.
Umthengisi wezinqola zabantwana uZhang Ying utshele izintatheli ukuthi uma kuyingane esanda kuzalwa, kufanele isebenze ngezinto eziningi, ilele ngemuva futhi ihlale emotweni esebenza ngezinto eziningi, inenzuzo ekukhuleni kwezingane. Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha, indawo izobe isinkulu. Ungakhetha ukuhlala wedwa esikhundleni sokulala phansi, ngoba ubuthongo obuncane ngaleso sikhathi. Lapho-ke cishe inonyaka owodwa ubudala, shintsha ube ibhayisikili elinamasondo amathathu, ongagibela angahlala, alungele ukukhula kwezingane.
Ochwepheshe bathi amakalishi wezingane asezingeni eliphakeme awanamiphetho ebukhali, izeluleko namaphrosesa ezindaweni ezifinyeleleka ezinganeni. Ngasikhathi sinye, okunye ukuphuma kufanele kube nezindawo zokuvikela ezifana namabhande okuphepha namaphakethe wesipanji.
“Njengezingane, abalaleli kakhulu futhi baqalaza emotweni. Uma kungekho bhande lokuphepha, kulula ukuthi ingane iwe emotweni. Ukuthi kunebhande lesiponji endaweni yesihlalo esibonakalayo sebhande kusetshenziselwa nokuvikela. Uma icinene kakhulu, noma ikhululekile kakhulu, futhi kulula ukuyivula, izophinde ibe nomthelela othile emzimbeni wengane iHezeze City Industry and Commerce Bureau yamalungelo abathengi kanye nelungu lesigaba sokuvikela izintshisekelo uShan Liang uthe.
Ochwepheshe bakholelwa ukuthi abazali kufanele bazame kakhulu esizeni ukubona ukuthi umzimba wemoto uqinile futhi uthwala isisindo somzimba. Uma umzimba usinda, uzinza futhi uphephe kakhudlwana. Ngasikhathi sinye, isondo lekalishi lomntwana kufanele libe nokumunca ukushaqeka, ukubopha amabhuleki neminye imisebenzi.